Isbarbardhig iyo faraqa u dhaxeeya QGIS iyo ArcGIS - Geofumadas
Marka la barbardhigo iyo khilaafaadka u dhexeeya QGIS iyo ArcGIS
Ogast, 2015 ArcGIS-ESRI, qgis
Saaxiibada GISGeography.com waxay sameysteen qoraal qiimo leh oo ay ku barbardhigayaan GQIS oo leh ArcGIS, wax ka yar mawduucyada 27.
Waxaa cad in nolosha labada gooboodba ay tahay mid aad u xun, iyada oo la tixgelinayo in asalka QGIS ay dib ugu noqdaan 2002, kaliya marka ugu dambeyntii muuqaalka rasmiga ah ee ArcView 3x soo baxday ... oo horey u jirtay safar ku filan.
Shaki la'aan marnaba horay u dhicin qaan-gaarin iyo caqabad ku saabsan mawduuca geospatial, sida mid ka mid ah khibrad ay isticmaaleen isticmaalayaasha labada xal. Dhanka kale, ESRI waxay taageertay waddo khaas ah oo shirkad leh oo ka badan sanadihii 40 ee suuqa, iyada oo mudnaanta u ah inay noqoto mid ka tarjumaysa aragti muuqata oo ka timid dhinaca suuq-geynta iyo dad aan dad gaar aheyn; halka QGIS ay tahay qorshaha ugu habboon ee habka GIS, kaas oo ku guuleystay inuu ka faa'iidaysto dhamaan noocyada kala duwan ee mawduuca OpenSource, ama in uu hoggaamiyo bulsho hogaaminaysa ma aha oo keliya tabarucid laakiin heerka xirfadeed ee sare.
Guud ahaan, isbarbardhigga ayaa na siinaya nalalka xiisaha leh dhinacyada sida:
1 QGIS waxay leedahay diiradda si aad u furto nooc kasta oo xog ah.
2 Labaduba waxay raadinayaan in ay fududeeyaan lakabka bandhigida ilaa qofkii ugu dambeeya, inkasta oo QGIS aysan ahayn mid sahlan hadaanu tixgelinno in hodantinnadu yihiin fiilooyinka.
3 Sahaminta xogta u dhaxeysa QGIS Browser iyo ArcCatalog waa mid xiiso leh, laakiin waxay gaaban yihiin illaa inta ay ku xiran yihiin jiritaanka metadata. Had iyo jeer way adag tahay in la raadiyo xogta.
4 Jaantusyada ururka waa fuoncionales labadaba, oo leh faa'iidooyin yar oo QGSIS ah.
5 Nuqulka mashruuca iyo bedelida habka isku-duwidda. Labaduba waa kuwo la aqbali karo marka la eego maareynta dhalashada iyo digaagga, inkastoo faa'idada ay ahayd in QGIS ay ugu dambeyntii ku guulaysatay inay akhriso iyadoon wax qalad ah la filaynin faylka .PRJ.
6 Arjiga weyn ee xogta internetka ee ArcGIS Online waa arrin taagan oo ku wajahan QGIS in plugin OpenLayers ay u oggolaato lakabyo badan oo laakinse wax badan maahan.
7 Juqraafiyadu waxay ka sarraysaa QGIS, laakiin ma aha sababta oo ah ArcMap ma laha, laakiin waxay ku xiran tahay nooca shatiga ee la heli karo, markaa hawlaha kala duwan ayaa loo isticmaali karaa. Dabcan, qalabka noocan oo kale ah waa suurtagal in la lumiyo ka hor inta aanad isku dayin dhammaan, haddii aan ka fikiro dhammaan hababka juqraafiyeed ee GRASS iyo SAGA leeyihiin, kuwaas oo aan jeclaan lahayn in aan haysanno hal xirmo oo keliya.
Dabcan, tani waa xaalad aan loo baahneyn in la sameeyo kartida software laakiin leh qaabka ganacsiga. Ahaanshaha QGIS ee liisanka GPL, wax walba waa la heli karaa.
8 Dunida of plugins waa ballaaran labada platforms. Inkasta oo QGIS ay aad u ballaaran tahay tan, halkaasoo ay jiraan waxyaabo badan oo ku xiran wax kasta, waxa ugu adag waxa weeye waxa ArcGIS Marektplace ka dhigto mid sahlan, sababtoo ah waxaa jira xalal wax walba oo leh diiradda takhasuska si fudud. Dabcan, waa inaad bixisaa.
Inkasta oo AGIS ay tahay mashiin xooggan oo mira dhal ah, ma haysto qalabyada ESRI oo dhammeystiran.
9 Maaraynta xogta Raster waxaa ka sarreeya ArcGIS. Inkastoo QGIS + GRASS bixiyaan dagaal, had iyo jeer waxa jira wax ay ArcGIS ka dhigeyso mid sahlan; haddii aan lagu darin qiimaha dheeraadka ah, ayadoo ay ugu wacan tahay dhibka udhaxeeya isku-xirnaanta iyadoo la tixgelinayo noocyada dhow.
10 Qalabka Geosattritic-ga ee ArcGIS laguma barbardhigi karo. Ma aha oo kaliya shaqeyn, laakiin waxbarashada.
11 Iyadoo xogta LiDAR ay tahay, mid waa inuu fekeraa, maxaa yeelay marka qaar ay soo jeedinayaan in ArcGIS ay ka baxday, qaar kale waxay yiraahdeen ESRI waxay ka fakareysaa inay soo bandhigto qaabka ay udub dhexaad u tahay.
Waxaan soo jeedinayaa in la fiiriyo oo lagu daro ururintaada, sababtoo ah maqaalka ka baxsan rabista inuu difaaco qalab (taas oo noqon lahayd midka cad), wuxuu isbarbardhigayaa isku midka 27 ee dhinacyada sida:
Maareynta Shaqada (Muuqaalka Dhismaha)
Waxyaabaha soo iibinta ee ugu dambeeyay
Faahfaahin iyo calaamado
Awoodsiinta khariidadaha joogtada ah
Khariidado xariif ah
Editing macluumaadka xogta
XY isku-duwaha iyo Codeyn
Isbedelka noocyada joomatariga
Marka la eego, waa shaqo adag oo keentay maqaalkan. Siyaabo badan oo hubaal ah waxay u baahan tahay qoto dheer, taas oo keliya ogyahay kuwa isticmaalay dhammaan waxqabadyada ArcGIS iyo jeexjeexyada kaabayaasha QGIS. Si kastaba ha noqotee, waxku waa mid ku qanacsan:
Marnaba ma aragno dagaalka epic ee software GIS sida mid ka mid ah oo aan hadda aragno.
Si aad u akhrido maqaal buuxa, eeg bogga.
Marka la eego, waxaan kugula talineynaa inaad raacdid xisaabta @GisGeography, in aan ku khasbanno inaan ku darno Top40 Geospatial Twitter.
Post Previous«Previous diiwaanka Land ee macnaha guud ee System transactional Qaranka
Post Next Qgis - Tusaale ka mid ah dhaqanka wanaagsan ee model ah OpenSourceNext »
2 Jawaab ah "Isbarbardhigga iyo faraqa u dhexeeya QGIS iyo ArcGIS"
Elva isagu wuxuu leeyahay: